Izibonelelo ezi-5 eziPhezulu zokuThatha iPhosphatidylserine (PS) -Gunyazisiweyo
Ikhaya > Phosphatidylserine (PS)
Ngokoluvo lwethu, Phosphatidylserine lolona nyango lubalaseleyo lufumaneka ngoku kwintengiso eCofttek. Sibonisa izizathu zethu zokuxhasa olu khetho. Okokuqala, esi songezelelo sinika elona xabiso liphezulu lemali - kulwandle lweemveliso ezibiza kakhulu, le phosphatidylserine isongezelelo iwela kwicala elifikelelekayo. Okwesibini, oku kongezwa yiCofttek kwenziwa kwindawo yokuhlola kwaye ke, umgangatho wayo unokuvavanywa. Imveliso ikwavavanyelwe ubunyulu kunye namandla. Ke, ukuba ujonge ukuthenga isongezelelo esihle sePhosphatidylserine, nceda unxibelelane nathi ku cofttek.com.
I-Phosphatidylserine (PS) FAQ
Yintoni i-Phosphatidylserine (PS)?
Indlela yokusebenza (PSi-phospholipid kunye nekhompawundi esondele kakhulu kwifayibha yokutya efumaneka ikakhulu kwinyama yomntu ye-neural. I-Phosphatidylserine idlala indima ebalulekileyo ekunqandeni umsebenzi kwaye ibalulekile ekusebenzeni kwengqondo njengoko iPhosphatidylserine incedisa ukuhanjiswa kwemiyalezo phakathi kweeseli zemithambo-luvo.
Ngokomndilili, ukutya okutya kwaseNtshona kubonelela malunga ne-130 mg yePhosphatidylserine yonke imihla. Intlanzi kunye nenyama yimithombo elungileyo yePhosphatidylserine, ekwafumaneka kumanani amancinci kwimveliso yobisi kunye nemifuno. I-Soy lecithin yenye indawo elungileyo yePhosphatidylserine. Nangona kunjalo, nangona i-Phosphatidylserine inokuthi idityaniswe ngumzimba kwaye ichithwe kukutya ngendlela yemithombo yendalo, uphando lwaphambi kokubonisa lubonisa ukuba amanqanaba ayo ayahla ngokweminyaka. Ke, kwezi ntsuku, i-Phosphatidylserine supplementation iyakhuthazwa, ngakumbi kubantu abadala ababhalisa nakuphi na ukwehla kwememori kunye nokuqonda kwengqondo.
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, ibango lezincedisi zePhosphatidylserine lonyuke kakhulu ukusukela oko izongezo zePhosphatidylserine zithathwa njengeyeza lendalo kwiimeko ezahlukeneyo, ezinje ngexhala, i-Alzheimer, ukunqongophala kwengqwalaselo-ukuphazamiseka kwengqondo, uxinzelelo, uxinzelelo kunye ne-multiple sclerosis. Ukuba ngaphandle, izongezo zePhosphatidylserine ziyaziwa ukuphucula imveliso yomzimba, ukwenza umthambo, imo yokulala kunye nokulala.
Kweli nqaku, kunye nokuxoxa ngemisebenzi ephambili kunye nezibonelelo zePhosphatidylserine, siya kuphinda simbele nzulu ukuveza eyona nto incomekayo yePhosphatidylserine ekhoyo ngoku kwintengiso.
Yintoni efanelekileyo ye-phosphatidylserine?
Ngaba phosphatidylserine iyasebenza?
Ukuthatha i-phosphatidylserine kunokuphucula ezinye zeempawu zesifo i-Alzheimer emva kweeveki ezi-6 ukuya kwezi-12 zonyango. Kubonakala kusebenza kakhulu kubantu abaneempawu ezingaphantsi. Nangona kunjalo, i-phosphatidylserine inokuphulukana nokusebenza kwayo ngokusetyenziswa okwandisiweyo.
Ngaba phosphatidylserine ikwenza wozele?
I-Phosphatidylserine sisongezelelo sesondlo se-phospholipid esima kwimveliso ye-cortisol emzimbeni, ivumela impilo, amanqanaba aphezulu e-cortisol ukuba anciphise, kwaye ngenxa yoko, ukulala okuzolileyo kuya kwenzeka.
Ziziphi iinzuzo phosphatidylserine?
Makhe sijonge kwezinye izibonelelo eziphambili zePhosphatidylserine (PS):
IsYindlela efanelekileyo yokunyanga ngokuchasene nokuhla kweCognitive and Dementia
Uphando lokuqala olwenziwe kwizilwanyana luveze ukuba ukongezwa kwexesha elide kwePhosphatidylserine kunciphisa izinga lokuhla kwengqondo okanye ukubuyisela umva ngokupheleleyo kwiigundane. Ukulandela ezi zigqibo zintle, izifundo zaqhutywa ukuhlalutya isiphumo sokutya kwePhosphatidylserine ebantwini kunye nezifundo ezininzi ezingqinisisa inyani yokuba i-200 mg efakwe ngaphakathi kwi-Phosphatidylserine kwizigulana ze-Alzheimer inyusa inqanaba le-dopamine kunye ne-serotonin, iihomoni ezimbini ezibhalisa ukwehla okukhulu kungenjalo ngenxa yale meko. Okubaluleke ngakumbi kukuba, i-Phosphatidylserine ikwenza umsebenzi ophambili wokugcina imetabolism yeswekile, ekwanika isiqabu kwesi sifo. Ipapashwe kwi-2: Phosphatidylserine kunye nengqondo yomntu
Used Isetyenziselwa ngesiqhelo kwiNototropic Effect yayo
Isongezelelo se-Phosphatidylserine sisoloko sibekelwe abantu abadala ukuba baphucule ingqalelo yabo kunye nokunciphisa izakhono zokucinga. Uphando lokuqala olufunde isiphumo se-Phosphatidylserine kwimemori yokusebenza kubantu abakhulileyo abangaphazamisekanga kwengqondo abanxibelelanisa ne-300mg ye-soy-based Phosphatidylserine intake yeenyanga ezintathu kunye nememori ebonakalayo ephuculweyo. Ukanti olunye uphononongo luvavanye ifuthe leoli yeentlanzi i-Phosphatidylserine kwimemori kwaye yaveza ukuba i-Phosphatidylserine supplementation iphucule ukukhumbula ngokukhawuleza isenzo kubantu abadala ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-42. Ke, i-Phosphatidylserine ngokuqinisekileyo inefuthe le-nootropic emzimbeni. Nangona kunjalo, uphando ngokusebenza ngempumelelo kwe-Phosphatidylserine esekwe kwisityalo ukunqanda ukulahleka kwememori okunxulumene nobudala kusikelwe umda kwaye umsebenzi omninzi uyadingeka kule ndawo.
Ukungeniswa kwe-Phosphatidylserine Inxulunyaniswa nokuPhuculwa kokuSebenza koMthambo
Ingxelo epapashwe kwiMedicine yezeMidlalo iveze ukuba bukhona ubungqina obaneleyo bokubonisa ukuba i-Phosphatidylserine supplementation inxulunyaniswa nokusebenza okuphucukileyo kwezemidlalo kunye nokwenza umthambo. Uphononongo lukwatsho ukuba ukuxhaswa rhoqo kwePhosphatidylserine kunciphisa ukukhathazeka kwemisipha kunye nomngcipheko wokuba nomonzakalo. Kwangokunjalo, olunye uphononongo luveze ukuba ukongezwa kwePhosphatidylserine kangangeeveki ezintandathu kuphucule indlela abagadi begalufa abaphuma ngayo nokudibanisa iPhosphatidylserine necaffeine kunye nevithamini kunciphisa iimvakalelo zokudinwa emva kokuzilolonga. Nangona kunjalo, kufuneka kugcinwe engqondweni ukuba olu phuculo alumakishwa kakhulu.
④ I-Phosphatidylserine inceda ukulwa noxinzelelo
Ngo-2015, uphando olwapapashwa kwi-Mental Illness lwabonisa ukuba kubantu abaneminyaka engama-65 nangaphezulu, i-Phosphatidylserine, i-DHA kunye ne-EPA rhoqo zinokunciphisa ukudakumba. Kwangokunjalo, olunye uphononongo luveze ukuba ukongezwa kwePhosphatidylserine kukhuthaza iimvakalelo zokwoneliseka kunye nolonwabo emva kweseshoni yokuzilolonga ngokunciphisa inqanaba le-cortisol ebangelwa luxinzelelo okt ihormone yoxinzelelo.
Inokusetyenziselwa ukunyanga i-ADHD ebantwaneni
Isifundo sika-2012 safunda isiphumo se-Phosphatidylserine kubantwana abane-ADHD okanye isifo sokujongana nentsholongwane. Ngama-200 abantwana abane-ADHD abathathe inxaxheba kolu phando, egqiba ukuba iiveki ezili-15 zonyango kusetyenziswa i-Phosphatidylserine ngokudibeneyo nee-asidi ezingama-omega-3 ezinamafutha zazisebenza kakuhle kunyango i-ADHD. Abantwana abanikwe le nhlanganisela ibhalisiweyo inciphisile indlela yokuziphatha okanye inkuthazo kunye nemo yokuphucula imeko. Ngo-2014, kwenziwa olunye uphando lokuhlalutya i-phosphatidylserine kwi-placebo kubantwana abangama-36 abaphethwe yi-ADHA kwiinyanga ezimbini. Ekupheleni kwesifundo, iqela lonyango labonisa ukuphuculwa kwememori nokuqwalaselwa.
⑥ Ezinye iZibonelelo
Ngaphandle kwezibonelelo ezichazwe apha ngasentla, i-Phosphatidylserine isongezelelo ikudityaniswa nokuphuculwa kokuhamba kwe-anaerobic, ukunciphisa ukukhathala kunye nokusebenza ngokuchanekileyo kokuchaneka kunye nesantya.
Yintoni isakhiwo phosphatidylserine?
I-Phosphatidylserine yi-phospholipid-ngakumbi i-glycerophospholipid -equkethe ii-acid ezimbini ezinamathele kunxibelelwano lwe-ester ukuya kwi-carbon yokuqala kunye neyesibini ye-glycerol kunye ne-serine eqhotyoshelwe ngokudibanisa i-phosphodiester ukuya kwikhabhoni yesithathu ye-glycerol.
Kutheni sifuna iPhosphatidylserine (PS)?
Ngeentsuku ezithile, ingqondo yethu ivakalelwa ngathi ivalekile kwaye ayinakwenza nawuphi na umsebenzi. Kwiimeko ezininzi, oku kwenzeka ngenxa yokuncipha kokuqonda, imeko exhaphake kubantu abadala kodwa inqabile kubantu abadala abancinci. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, izazinzulu kunye nabaphandi babonakalise ukuzithemba okukhulu kubuchule bePhosphatidylserine bokunyanga ukusebenza kwengqondo okunciphileyo. Okubaluleke ngakumbi kukuba, ukukhula kophando kule ndawo kuye kwabhenca abantu kwezinye izibonelelo zePhosphatidylserine, njengokukwazi ukunyanga iimeko, ezinje ngesifo se-Alzheimer kunye ne-ADHD kunye nokukwazi kwayo ukonyusa ukulala kunye nokwenza ngcono imeko.
Ngaphambi kokungena kwiinkcukacha zento eyenziwa yiPhosphatidylserine emzimbeni womntu, masiqale siqonde ukuba yintoni iPhosphatidylserine (PS).
Yintoni i-Phosphatidylserine (PS) yokuSebenzisa?
Kule minyaka imbalwa idlulileyo, ibango lezincedisi zePhosphatidylserine liye lenyuka kakhulu ngenxa yokusetyenziswa kwePhosphatidylserine (PS). Kwabaqalayo, i-Phosphatidylserine isebenza kakhulu ekuphuculeni ukusebenza kwengqondo kunye nokunciphisa ukuhla kwengqondo. Kwangokunjalo, ikwabonakalisile ukuba iyasebenza ngokuchasene ne-ADHD ebantwaneni nakubantu abadala kunye nokujongana ngokufanelekileyo noxinzelelo lokuzivocavoca ngokunciphisa amanqanaba e-cortisol emzimbeni. Kukwaziwa nokuba kukonyusa ingqalelo yomntu, inkumbulo yokusebenza kunye nokukhutshwa kwemithambo. I-Phosphatidylserine yaziwa ngokuba yimood kunye ne-booster yokulala. Ngenxa yazo zonke ezi zizathu nangaphezulu, ibango lezincedisi zePhosphatidylserine liye landa kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo.
Yimalini iphosphatidylserine ekufuneka ndiyithathile ukuthoba i-cortisol?
Umthamo ochanekileyo we Phosphatidylserine (PS) kuxhomekeke kwisibonelelo esenzelwe sona. Imvumelwano ngokubanzi kukuba idosi esemgangathweni ye-100 mg, ethathwe kathathu ngemini, ngaloo ndlela iyonke eyi-300 mg yonke imihla, ikhuselekile kwaye isebenza ngokuchasene nokuhla kwengqondo. Kwelinye icala, xa i-Phosphatidylserine isetyenziselwa ukunyanga i-ADHD, idosi esemgangathweni eyi-200 mg ngosuku ithathwa njengefanelekileyo kubantwana kwaye i-400 mg ngosuku ithathwa njengefanelekileyo kubantu abadala. Kwi-Alzheimer's, idosi ye-300-400 mg ithathwa njengeyimfuneko. Ukuba isongezelelo sePhosphatidylserine sisetyenziselwa ukuphucula imveliso, abasebenzisi bayacelwa ukuba bangadluli kumyinge we-300 mg ngosuku.
Uwehlisa njani amanqanaba e-cortisol?
Unokuthatha ukongezwa kwePS ngosuku ngemini kangangeentsuku ezili-10 zempendulo yecortisol engaphambi nangexesha lokuzilolonga.
Yintoni icortisol emzimbeni wakho?
ICortisol yihomoni ye-steroid elawula iinkqubo ezahlukeneyo emzimbeni wonke, kubandakanya imetabolism kunye nokuphendula komzimba. Inendima ebaluleke kakhulu ekuncedeni umzimba uphendule kuxinzelelo.
Yimalini phosphatidylserine ekwisoyc lecithin?
Amacandelo aphambili e-lecithin evela kurhwebo lweembotyi zesoya ngala: 33-35% yeoyile yesoya. 20-21% Phosphatidylinositols. 19-21% Phosphatidylcholine.
I-Phosphatidylserine ifumaneka kwi-soy lecithin malunga ne-3% ye-phospholipids iyonke.
Kufuneka uthathe nini i-phosphatidylserine?
I-Phosphatidylserine isebenza kwisigaba sokuqala, xa amanqanaba e-cortisol ephezulu. Kungcono ukuthathwa xa amanqanaba e-cortisol ephezulu. Umzekelo, ngaba uvuka ube kwimeko yoxinzelelo ngenxa yoxinzelelo lomsebenzi? Thatha kusasa ukuze uthintele uxinzelelo kunye noxinzelelo olwandileyo.
Ngaba iphosphatidylserine kufuneka ithathwe ebusuku?
I-Phosphatidylserine (i-PS 100; thatha enye ukuya kwezimbini ngexesha lokulala). I-Phosphatidylserine sisongezelelo sesondlo se-phospholipid esima kwimveliso ye-cortisol emzimbeni, ivumela impilo, amanqanaba aphezulu e-cortisol ukuba anciphise, kwaye ngenxa yoko, ukulala okuzolileyo kuya kwenzeka.
Kuthatha ixesha elingakanani ukuze isebenze i-phosphatidylserine?
Ukuthatha i-phosphatidylserine kunokuphucula ezinye zeempawu zesifo i-Alzheimer emva kweeveki ezi-6 ukuya kwezi-12 zonyango. Kubonakala ngathi isebenza kakuhle kubantu abaneempawu ezingalunganga.
Zeziphi iziphumo ebezingalindelekanga zephosphatidylserine?
I-Phosphatidylserine inokubangela iziphumo ebezingalindelekanga ezifana nokuqaqanjelwa sisisu kunye nokuphazamiseka kwesisu, ngakumbi kwiidosi ezingaphezu kwe-300 mg. Kukho inkxalabo yokuba iimveliso ezenziwe kwimithombo yezilwanyana zinokuhambisa izifo, ezinje ngesifo seenkomo eziphambeneyo.
Nguwuphi umahluko phakathi kwe-L serine kunye ne-phosphatidylserine?
I-L-serine yi-amino acid ebalulekileyo ekudibaneni kwe-phosphatidylserine, eyinxalenye yelungu leeseli zengqondo (okt, ii-neurons). Inokuveliswa emzimbeni, kubandakanya nengqondo, kodwa ukubonelelwa kwangaphandle ekudleni kubalulekile ekugcineni amanqanaba afanelekileyo.
Yintoni ebangela ukuswela kwe-serine?
Ukuphazamiseka kweserine kubangelwa sisiphene kwenye yeendlela ezintathu zokwenza i-enzymes yendlela ye-L-serine biosynthesis.
Wenza ntoni uL Tyrosine emzimbeni?
Ungayibona ityrosine ithengiswa ngefomu yokongeza kunye okanye ngaphandle kwe "L." ITyrosine ikhona kuzo zonke izicwili zomzimba womntu nakuninzi lwamanzi. Inceda umzimba ukuba uvelise ii-enzymes, iihomoni ze-thyroid, kunye ne-melanin yesikhumba. Inceda nomzimba ukuvelisa ii-neurotransmitters ezinceda iiseli zemithambo-luvo zinxibelelane.
Yintoni umsebenzi weserine?
I-Serine yi-polar amino acid edlala indima ebalulekileyo kwimetabolism yezityalo, ukukhula kwezityalo, kunye nokusayinwa kweseli. Ukongeza ekubeni sisakhiwo seeproteni, uSerine uthatha inxaxheba kwi-biosynthesis yee-biomolecule ezifana neeamino acid, ii-nucleotides, i-phospholipids, kunye ne-sphingolipids.
Kukuphi ukutya okuphezulu kwi-phosphatidylserine?
Unokonyusa ukungenisa kwakho i-phosphatidylserine nangona ukutya-kufumaneka kwinani lokutya, kubandakanya isoya (oyena mthombo uphambili), iimbotyi ezimhlophe, izikhupha zamaqanda, isibindi senkukhu, kunye nesibindi senyama.
Ziziphi iinzuzo zempilo phosphatidylserine?
Iivithamini, iiminerali, kunye nee-micronutrients kwi-phosphatidylserine zibonelela ngezibonelelo ezithile zempilo. I-Phosphatidylserine yaziwa ngokusebenza njenge-antioxidant, inceda ekunciphiseni ifuthe leeradicals eziyingozi emzimbeni wakho. Oku kunokukunceda ukunciphisa umngcipheko wokuphuhlisa iimeko ezinje ngeswekile kunye nomhlaza.
Isebenza njani i-phosphatidylserine njengophawu lwe-apoptosis?
Iiprapholipid scramblases zabantu (hPLSCRs) zidlala indima ebalulekileyo kwiinkqubo eziphambili zeselfowuni. I-hPLSCR1 ibangela i-apoptosis yi-phosphatidylserine exposure mediated phagocytosis. I-hPLSCR3 ilamla ukubonakaliswa kwe-cardiolipin Mediated apoptosis kwimitochondria.
Ngaba i-phosphatidylserine yi-amino acid?
I-L-serine yi-amino acid ebalulekileyo ekudibaneni kwe-phosphatidylserine, eyinxalenye yelungu leeseli zengqondo (okt, ii-neurons). Inokuveliswa emzimbeni, kubandakanya nengqondo, kodwa ukubonelelwa kwangaphandle ekudleni kubalulekile ekugcineni amanqanaba afanelekileyo
Yintoni eyona ndima iphambili yePhosphatidylethanolamine?
I-Phosphatidylethanolamine idlala indima kwindibano ye-lactose permease kunye nezinye iiproteni zeembrane. Isebenza njenge 'chaperone' ukunceda iiproteni zeembumba ngokuchanekileyo zilungelelanise izakhiwo zazo zemfundo ephezulu ukuze zikwazi ukusebenza kakuhle.
Ngaba i-phosphatidylserine ilipid?
I-Phosphatidylserine (PtdSer), eyona ndawo ibalulekileyo yeembumba ze-eukaryotic, yeyona phospolipid ininzi kakhulu kwi-eukaryotic cell accounting ukuya kuthi ga kwi-10% ye-lipid yeselula iyonke. Ininzi yento eyaziwayo malunga nePtdSer yindima ye-exofacial PtdSer edlala kwi-apoptosis kunye nokuqunjelwa kwegazi.
Isebenziselwa ntoni i-phosphatidylcholine?
I-Phosphatidylcholine ikwasetyenziselwa ukunyanga i-hepatitis, i-eczema, isifo se-gallbladder, iingxaki zokujikeleza, i-cholesterol ephezulu kunye ne-premenstrual syndrome (PMS); ukuphucula ukusebenza kwe-dialysis yezintso; yokunyusa amajoni omzimba; kunye nokuthintela ukwaluphala.
Ngaba i-phosphatidylserine yi-zwitterionic?
Ezi proteni zibopha kakubi i-phospholipids (i-cardiolipin, i-phosphatidylglycerol, i-phosphatidylserine, i-phosphatidylinositol) kodwa hayi i-zwitterionic okanye i-phospholipids engathathi hlangothi (phosphatidylethanolamine, phosphatidylcholine).
Ngaba i-phosphatidylserine iyafana ne-phosphatidylcholine?
I-phospholipids phosphatidylserine (PS) kunye ne-phosphatidylcholine zezona zinto zibini zivunywa rhoqo ngabantu abadala kunye nezikhalazo zememori ngabanini bezinto zokutya.
Ngaba i-phosphatidylcholine cholesterol esezantsi?
I-Oral polyunsaturated phosphatidylcholine inciphisa iplatelet lipid kunye nomxholo wecholesterol kumavolontiya asempilweni.
Ngaba phosphatidylserine uncedo ukunciphisa umzimba?
Ngamafutshane, i-phosphatidylserine iyanceda ukunciphisa umzimba ngokulawula amanqanaba e-cortisol. Nantsi indlela esebenza ngayo: ukuphendula uxinzelelo, iincindi zamadlala zivelisa ihomoni ebizwa ngokuba yi-cortisol. Ngokukhawuleza ingena kwigazi kwaye ikuvumela ukuba uhlangabezane ngcono nokukhuthaza kwangaphandle.
Ngaba i-Phosphatidylserine (PS) ikhuselekile?
Uphando olwenziweyo ukuza kuthi ga ngoku lutyhila ukuba i-Phosphatidylserine inyamezelwa kakuhle ngumzimba kwaye xa ithathwa ngomlomo, kukhuselekile ukuthatha i-Phosphatidylserine ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-3 idosi yemihla ngemihla engagqithiyo kwi-300 mg ngosuku. Abantwana bangazithatha ezi zongezo ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-4. Nangona kunjalo, ukugqithisa idosi yemihla ngemihla engaphaya kwama-300 mg ngemini kungakhokelela kwiziphumo ebezingalindelekanga njengokukrala kunye nemiba yesisu. Abasetyhini abakhulelweyo nabancancisayo kufuneka bahlale kude nezongezo zePhosphatidylserine njengoko kungekho bungqina baneleyo bokubonisa ukuba ezi zongezelelo zikhuselekile kula maqela.
Uninzi lwabantu luthanda izongezelelo ezisekwe kwizityalo i-Phosphatidylserine njengoko kukholelwa ukuba ukongezelelwa okusekwe kwizilwanyana kubonakalisa abasebenzisi kwizifo ezinxulumene nesilwanyana. Nangona kunjalo, akukho phononongo lophando olufumene nabuphi na ubungqina obuqinisekileyo bokuxhasa lo mbono.
Ungawuthengaphi Powder Phosphatidylserine (PS) ngobuninzi?
Nokuba uyinkampani eyenza izongezo zePhosphatidylserine okanye umntu ofuna ukuthenga i-Phosphatidylserine (PS) umgubo ngobuninzi bezinye iinjongo, eyona ndawo ifanelekileyo yokuthenga cofttek.com.
I-Cofttek sisongezo semveliso ekrwada esele ikwimakethi ukusukela ngo-2008. Inkampani iyazibophelela ekuveliseni iimveliso ezikumgangatho ophezulu kwaye ineqela lezakhono elinamava kwaye elinamava elisebenza ubusuku nemini ukuqinisekisa ukuba abathengi bafumana okona kulungileyo. iimveliso ezisemgangathweni kwimali yabo. ICofttek sele inabathengi kunye nabathengi kwiindawo ezahlukeneyo zaseIndiya, China, Yurophu naseMntla Melika. Ikwanayo neqela lokuthengisa elizinikeleyo eliqinisekisa ukuba bonke abathengi beenkampani baba ngabathengi abonwabileyo. I-Phosphatidylserine powder enikezelwa yiCofttek iza kwiibhetshi ezingama-25 kilogram kwaye inokuthenjwa ngokungaboniyo kumgangatho kunye nokuthembeka. Ke, ukuba ujonge thenga umgubo wePhosphatidylserine (PS) ngobuninzi, musa ukuthenga kwenye indawo kodwa eCofttek.
(1) I-PHOSPHATIDYLSERINE (51446-62-9)
(2) Ipapashiwe: Phosphatidylserine kunye nengqondo yomntu
(3) Iziphumo zokuncedisa i-phosphatidylserine ekusebenziseni abantu
(4) I-lecithin phosphatidylserine kunye ne-phosphatidic acid complex (PAS) inciphisa iimpawu zesifo se-premenstrual syndrome (PMS): Iziphumo zolingo olulawulwayo, olulawulwa yi-placebo, oluyimfama kabini
Umgaqo-nkqubo wobuNzululwazi: Phosphatidylserine
(13) Izibonelelo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-pyrroloquinoline quinone (pqq).